फोरस्क्वायरमा के गलत छ? | Martech Zone
बिहीबार, अप्रिल 7, 2011 शुक्रबार, अप्रिल 8, 2011 Douglas Karr
मैले फोरस्क्वायरमा मात्र छान्नु हुँदैन ... मसँग सबै भन्दा बढि सोशल मिडिया अनुप्रयोगहरूको साथ समान मुद्दा छ। लगभग सबै सामाजिक प्लेटफर्ममा समस्या उस्तै हो। फोरस्क्वायरको साथ, समस्या भने धेरै स्पष्ट छ, यद्यपि। व्यवसायहरू प्लेटफर्मको फाइदा लिन चाहन्छन् - तर यसको कुनै साधन छैन।
नतिजाको रूपमा, तपाईं यस प्रकारको बकवास प्राप्त गर्नुहुन्छ ... केही कम्पनी जुन म नजिक छैन र जसको मसँग कुनै सम्बन्ध छैन, मलाई उनीहरूको साथी हुन सोध्छ।
त्यहाँ सँधै सम्भावना हुन्छ कि यो एक स्प्यामर हो, तर म यकिन छैन। यो, वास्तवमा, एक व्यवसाय हुन सक्दछ जसले मलाई लक्षित गरेको छ र उनीहरूसँग सम्बन्ध भएको उनीहरूको इच्छा छ। वास्तविक समस्या यो हो कि उनीहरूलाई फोर्सक्वायर मार्फत वास्तवमै त्यस्तो गर्नको लागि कुनै साधन छैन - त्यसैले उनीहरूले यस विधिलाई सहारा लिनुपर्दछ।
व्यवसाय र उपभोक्ता बीचको सम्बन्ध नयाँ सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको निर्माण मा एक पछाडि विचार हुन रोक्न आवश्यक छ। यस्तो देखिन्छ कि केवल ब्यापारहरूलाई यी व्यवसायहरूमा अवसर प्रदान गरिन्छ जब त्यहाँ राजस्व उत्पन्न गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैले फोरस्क्वायर विशेष।
यदि म व्यापार हो भने, म फोरस्क्वायरमा एउटा विशेष पोस्ट गर्न सक्दछ उपभोक्ताहरूको फाइदा लिन ... एक पटक उनीहरू चेक-इन गरे। फोरस्क्वायरमा अर्को समस्या छ। धेरै व्यवसायहरूले उपभोक्ताहरूलाई लुकाउन आवश्यक पर्दैन पछि उनीहरू पहिले नै ढोकाबाट भित्र आएका छन् - समस्या उनीहरूलाई भइरहेको छ लाई अगाडिको ढोका
फोरस्क्वायरले यहाँ ठूलो अवसर गुमाइरहेको छ। उपभोक्ताहरू जडान गर्न चाहानुहुन्छ व्यवसायको साथ - यो विन्ती र व्यवसाय द्वारा विज्ञापन गरिएको भन्दा फरक छ। विज्ञापन काम गर्दैन ... सम्बन्ध छैन। के यदि फोरस्क्वायर, यसको सट्टामा, तपाइँले तपाइँको वरपरका ठाउँहरू फेला पार्न एक राम्रो सफा ईन्टरफेस प्रदान गर्नुभयो जुन तपाइँका साथीहरू प्राय: जसो एक सेग्मेन्टेसन उपकरणको साथ हुन्छ ताकि तपाइँ व्यवसायको प्रकार खण्ड गर्न सक्नुहुनेछ।
र के हुन्छ यदि फोर्सक्वायरले व्यवसायलाई तपाईंको साथीहरूको नेटवर्कमा अफरहरू प्रकाशित गर्ने अवसर दियो र तिनीहरूलाई तपाईंसँग सामेल गराउनुहोस् जब तपाई चेक इन गर्नुहुन्छ? अब यो एक उपकरण हो जुन दुबै व्यवसाय र उपभोक्ताहरूले सराहना गर्छन्!
अप्रिल 8, 2011 मा 12: 29 PM
हुनसक्छ अर्को कारण मैले यो फोन अनुप्रयोग पत्ता लगाउन र विकास गर्नु आवश्यक पर्दछ म केही समयको लागि खैरो मामलामा टम्बल गर्दैछु।